काम गरेन वैकल्पिक माध्यमले,स्कूल कहिले खुल्ला ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
काम गरेन वैकल्पिक माध्यमले,स्कूल कहिले खुल्ला ?
वीरेन्द्रनगर–८, खजुरामा रहेको शिद्ध बहिरा बालक स्कूलको ठिक अगाडि सोही विद्यालयमा अध्ययनरत स्वस्तिका सिंहको घर छ । तर उहाँ न विद्यालय जान सक्नुहुन्छ, न त घरमै बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ । विद्यालयमा साथीहरूसँग खेल्दै, रमाउँदै पढेको सम्झँदा उहाँलाई पीडा हुन्छ । र, मनमा एउटै प्रश्न खेलिरहन्छ– ‘स्कूल कहिले खुल्ला ?
स्वस्तिका मात्र होइनन्, उहाँजस्ता थुप्रै दृष्टिविहीन बालबालिका कोरोना कहरको कारण अध्ययनबाट वञ्चित छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट साधारण विद्यार्थीको लागि वैकल्पिक सिकाइको अभ्यास भए पनि अपाङ्गताजस्ता विशेष अवस्थाका बालबालिकाको लागि सिकाइको प्रभावकारी विकल्प उपयोग भएको देखिँदैन । कक्षा ६ मा अध्ययनरन १३ वर्षीया स्वस्तिका साङ्केतिक भाषामा आफ्नो पीडा पोख्नुहुन्छ । ‘पढ्न मन त लाग्छ, तर पढ्ने उपाय ९माध्यम० छैन । घरमै कसरी पढ्ने ? ’
शिद्ध बहिरा स्कूलमै पढ्ने वीरेन्द्रनगर–११ की अस्मिता भट्टराईको समस्या पनि उस्तै छ । उहाँ बेलाबेला किताबका पाना पल्टाउनुहुन्छ, एकछिन हेर्नुहुन्छ र नबुझेपछि दिक्क मान्दै किताब थन्काउनुहुन्छ । उहाँसँग पनि एउटै प्रश्न छ, ‘स्कूल कहिले लाग्छ ? घरमा बस्दा दिक्क लागिसक्यो ।’
‘हामीले चाहेर पनि पठनपाठनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्णाली प्रदेशसहित अन्य प्रदेशका बालबालिका पनि पढ्ने भएकोले यहाँ ल्याएर तत्काल पढाउन सकिने अवस्था छैन ।’ विद्यार्थी भर्नाको कामसमेत अघि नबढेको उहाँले बताउनुभयो । सुर्खेतकै शिखर मावि, रामघाटमा अध्ययरत प्रकाश सञ्ज्याल दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । विद्यालयको आवासमै बसेर पढ्ने उहाँ लकडाउनपछि घर ९कालीकोट० जानुभएको छ । गाउँमा रेडियो सुनिँदैन । इन्टरनेटको समेत पहुँच छैन । घरमै पढ्ने उहाँसँग ब्रेललिपिसम्बन्धी सामग्री छैनन् । घर गएपछि पढ्न नपाएको उहाँको दुखेसो छ ।
कोरोनाका कारण चैतयता सम्पूर्ण विद्यालय बन्द छन् । पछिल्लो समय केही विद्यालयहरू खुल्न पनि थालेका छन् । केही विद्यालय फेरि बन्द हुँदैछन् । सरकारले विद्यालय सञ्चालन नगर्न भनिरहेको छ । सरकारले शिक्षण सिकाइलाई सहजीकरण गर्न वैकल्पिक माध्यमलाई अघि सारेको छ । तर वैकल्पिक माध्यम अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उपयुक्त भएको छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ।
प्रकाशित मिति : आश्विन २६, २०७७ सोमबार ७ : २७ बजे